Logitech na-agbasa ezinụlọ G yana ndị ọkà okwu na keyboard maka igwe egwuregwu | Akụkọ akụrụngwa
Ọ bụrụ na anyị na-eme atụmatụ imegharị keyboard anyị ma chọọ ka ọ dịruo ọtụtụ afọ, ma ọ bụrụ na n'otu ọrụ ahụ, anyị na-eme atụmatụ imegharị keyboard anyị, nhọrọ kachasị mma anyị nwere ike ịchọta ugbu a n'ahịa bụ Logitech. Logitech dị n'ahịa ruo afọ ole na ole na-egosi na ọ maara otu esi eme ihe na nke ahụ mgbe o mere ha, ọ na-eme ha nke ọma.
Ọ bụghị naanị na ụlọ ọrụ a na-emepụta ngwaahịa akpaaka ọfịs, mana ọ dị obere oge, ebe ọ bụ na zụta Saitek Otu afọ na ọkara gara aga, ọ lekwasịrị anya na imeghari na imeziwanye, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, usoro dum nke ngwaahịa maka ndị egwuregwu. A na-ahụ ihe atụ ikpeazụ n'ime ọhụrụ G523 n'ibu keyboard na G560 ọkà okwu iji na gamers.
1 Kiiboodu logitech G513
2 Ndị na-ekwu okwu Logitech G560 LIGHTSYNC
Kiiboodu logitech G513
Logtech G513 bụ keyboard arụ ọrụ, keyboard nke anyị nwere ike ịtụle nwanne nne nke G413 ugbu a, na-enye ya ihe pụrụ iche, ebe ọ bụ na aluminom aeronautical aluminom na-eme ka casing elu. Ọ nwere ọdụ ụgbọ mmiri USB nke anyị nwere ike ịgba ụgwọ ngwaọrụ ọ bụla na eriri USB nke na-ejikọ na kọmputa nwere ike iwepu, nke na-enye anyị ohere iji ngwa ọzọ dochie ya.
Ọdịiche ọzọ anyị na - ahụ na ụdị G413 bụ na ọ na - agbakwunye nkwojiaka ezumike mere nke a ụdị nke ebe nchekwa ụfụfụ kpuchie ya na leatherette kachasị mma, n'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ịhazigharị akụkụ nke iji nweta kiiboodu ma nwee ike ịnabata ụzọ egwu anyị.
Banyere usoro keyboard, ọzọ, ọ họrọla itinye usoro Romer-G ya, ọ bụ ezie na na nsụgharị ọhụrụ, nke ụlọ ọrụ ahụ enyeghị nkọwa, mana ha dị ka usoro Cherry Red. Ọgbọ ọhụrụ a nwere ike ịbụ nke ị ga - amalite iji na ngwaahịa ọhụrụ gị niile. Usoro a na - enye anyị nzaghachi ọfụma oge ọ bụla anyị pịa igodo.
Igodo Logitech G513 ga-abanye ahịa na Eprel na a ọnụ ahịa ya bụ $ 149,99 ma ọ ga - adị na agba abụọ: icheku na ọla ọcha.
Ndị na-ekwu okwu Logitech G560 LIGHTSYNC
Ndị otu Logitech G560 na-enye anyị sistemu stereo nke 2.1, 120 watts nke ike RMS ma dakọtara na 3D DTS: X Ultra 1.0. Ihe nlere a tinyekoro a njikọ Bluetooth, eriri USB ọzọ na ntinye na mmamiri 3,5 mm. N'ihi usoro Logitech Easy-Switch, anyị nwere ike ijikọ ngwaọrụ anọ ọnụ iji nwee ike ịnụ egwu mgbe ị na-anụ egwuregwu kachasị amasị anyị.
Mana iji nyekwuo ike, Logitech sitere n'ike mmụọ nsọ usoro Philips Ambilight iji nwee ike hazie agba anyị chọrọ ka ndị ọkà okwu gosipụta, n'etiti ọtụtụ, agba dị iche iche dịka egwu a na-egwu na egwuregwu ndị ga-eme n'ọdịnihu site na LIGHTSYNC API nke ụlọ ọrụ na-enye ndị mmepe.
Companylọ ọrụ ahụ kwenyesiri ike na maka mmalite ya, nke a ga-eme maka ọnwa na-abịa, ọtụtụ egwuregwu ga-enyerịrị nkwado maka LIGHTSYNC. Ọzọkwa, ọ bụrụ na emeliteghị egwuregwu gị maka sistemụ a, ị nwere ike ịmepụta gburugburu gị site na ngwa nke na-abịa na ndị na-ekwu okwu, ngwa ga-amata agba kachasị nke ihuenyo ahụ n'akụkụ nke onye ọrụ ahụ kpebiri igosipụta ndị ọkà okwu.
Ndị na-ekwu okwu Logitech G560 kwa Ha ga - ada n’ahịa n’April maka $ 199,99.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Logitech na-agbasa ezinụlọ G yana ndị ọkà okwu na keyboard maka ndị egwuregwu